18-sano oo kasoo wareegatay daawashada Kaho Naa Pyaar Hai iyo 11-xaqiiqo oo filimkaan u gaar ah – Filimside.net
18-sano oo kasoo wareegatay daawashada Kaho Naa Pyaar Hai iyo 11-xaqiiqo oo filimkaan u gaar ah
January 14, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: January 14, 2018
Maanta oo kale 14 Jan 2000 waxaa la daawaday filimka Blockbuster-ka weyn noqday sidoo kalena Classic weyn noqday Kaho Naa Pyaar Hai oo ilaa haatan Superstar Hrithik Roshan ku faano.
18-sano ayaa kasoo wareegatay markii Director Rakesh Roshan uuna baray wiilkiisa Hrithik Roshan kaasi oo Hindiya dhan qabsaday wuxuuna HR filimkaan ku matalay labo door sidoo kalena Ameesha Patel ayaa filimkaan iyadana kusoo caan baxday.
Hadaba waxaan idiin heynaa 11-xaqiiqo oo u gaar ah filimka Blockbuster-ka weyn noqday Kaho Naa Pyaar Hai:
Xaqiiqada 1-aad: Hrithik Roshan ma ahayn dooqa kowaad filimkaan waayo Rakesh Roshan wuxuu rabay inuu Shah Rukh Khan u dhiibo filimkaan iyo labadiisa door Rohit iyo Raj.
Xaqiiqada 2-aad: Ameesha Patel ma ahan dooqa kowaad ee doorka Sonia, waxaaba maal maha ugu horeeyay duubista filimkaan soo xaadirtay Kareena Kapoor oo markii dambe si la yaab leh isaga baxday mashruucaan!
Xaqiiqada 3-aad: Asha Patel oo filimkaan ku matashay Raj (Hrithik) hooyadiis waa hooyada sida runta ama xaqiiqada ah u dashay Ameesha Patel ama waa Ameesha Patel hooyadeed.
Xaqiiqada 4-aad: Hrithik Roshan wuxuu u baahnaa inuu jirkiisa dhiso si uu filimkiisa kowaad daawadayaasha ugu soo jiito, waxaana midaas garab ka siiyay Salman Khan oo sabab weyn u ahaa in xidigaan uu shaashada la imaado jirdhis dhalinta oo dhan soo jiitay.
Xaqiiqada 5-aad: Iska hilmaan in Prabhas marka uu Baahubali sameeyay 6,000 dalab guur ah soo gaareen waayo Hrithik Roshan marka uu filimkiisa kowaad sameeyay waxaa soo gaareen 30,000 dalab guur ah!
Xaqiiqada 6-aad: Madaama Hrithik Roshan lix farood gacanta midig ku leeyahay, wuxuu sameeyay arin xiiso badan oo ah in labadiisa door Raj iyo Rohit ay kala duwanaadaan, Marka uu doorka Raj jilaayo wuxuu sameeyay inuu daboolay lixdiisa farood muuqaal kasto asigoo adeegsanay gacan gashi (Hand Gloves) sidoo kalena gureey inuu yahay ayuu iska dhigaayay doorkiisa Raj.
Xaqiiqada 7-aad: Kaho Naa Pyaar Hai wuxuu noqday filimkii ugu weynaa lacagaha ugu badana soo xareeyay sanadii 2000 asigoo garaacay filimada waa weyn sida Mohabbatein, Har Dil Jo Pyaar Karega iyo kuwo kale.
Xaqiiqada 8-aad: Kaho Naa Pyaar Hai waxaa lagu aruursaday 102-biladood waxaana lagu daray buuga iskoorada biladaha lagu qoro Limca Book of Records asigoo noqday filim Bollywood sameeyeen midkiisa abaal marinada ugu badan lagu qaato.
Xaqiiqada 9-aad: Xasuuso ama dib u daawo muuqaalka bartamaha magaalada marka wadada isku xiran tahay oo ay Rohit iyo Sonia wada sugayaan inay wada furmato ama samaafaraha muujiyo calaamada socdaalka, waa marka ugu horeesay Rohit iyo Sonia is arkayaan filimka, waxaana muuqaalkan si xaqiiqo ah looga soo min guuriyay kulankii kowaad ee dhex maray Hrithik Roshan iyo xaaskiisii hore Sussanne Khan oo isku barteen wado jaam ah oo la wada sugaayo inuu samaaraha muujiyo astaanta socdaalka!
Xaqiiqada 10-aad: Maal maha ugu horeesay duubista filimkaan Hrithik wuu ka xishoon jiray inuu dadka soo hor istaago oo uu Dance sameeyo, balse gabadha qoobka cayaarka sameyso Farah Khan ayaa geesinimo iyo kalsooni dheeraad ah Hrithik siisay, kadibna Hrithik wuxuu noqday boqorka Dance-ga Bollywood-ka marwalbana wuxuu sheegaa in Farah Khan abaalkeeda uusan marnaba gudi karin.
Xaqiiqada 11-aad: Kaho Naa Pyaar Hai kaliya Hrithik Roshan iyo Ameesha Patel dadka ma uusan barin, sidoo kale heesaaga Lucky Ali ayaa dadka ku barteen filimkaan aqoonsina ku helay madaama labada hees uu ka qaaday siweyn u hirgaleen Ek Pal Ka Jeena iyo Kyun Chalti Hai Pavan.
Ek Pal Ka Jeena:
Kyun Chalti Hai Pavan (Na Tum Jano Na Hum):
Waxaa Aqrisay 1,268